Hery - Tsiky dia ampy | Oktobra 2011
Vaovao aty Italia
2011-10-14 @ 18:40 in Serasera.org
Any ianareo any Madagasikara,
Aza miaintaina ianareo raha maheno matetika vaovao mikasika an'i Italia. Atao hoana fa dia malaza mihitsy ity firenena ity amin'izao. Na izany aza anefa dia salama saina tsara daholo izahay.
Marina tokoa ny nolazainreo fa praiministra aty ilay Berlusconi. Io no fanoratra ny anarany fa tsy "Very Loha sy Con" izany na dia tena manomboka very saina tokoa aza izy. Mbolaa praiminisitra izy ary tsy mieritreritra ny hametra-pialana na dia imbetsaka aza no voarohirohy amin'ny resaka maro. Ka eto Italia tsy mb mitovy amin'ny firenena hafa aty Eoropa fa mitovy amin'ny any Afrika ihany. Misy aza efa tokony higadra ny politisiana dia avoakan'ny namany anaovana latsa-bato mihitsy.
Mianatra tsara ny ankizy amin'izao. Napitsangam-bolo ahy fotsiny androany ny nihaino ny resaky ny mpiara-miasa aminay iray manan-janaka efa mianatra any amin'ny scuola materna an'ny fanjakana. Mba misy ao anatin'ny fandaharam-potoana hono hoe misy heures d'informatique, dia nasaina nividy boky ny ray aman-dreny, kinanjo kay tsy misy ordinatera akory ao amin'ilay sekoly. Tsy mbola nomen'ny fanjakana dia bbangoana fotsiny ao ny salle. Dia zavatra tahaka izany no hanabeazana ny zanakay aty.
Andefaso voajobory sy vary mena rehefa misy mandeha aty. Ny vary mena no tena hahaatsiarovanaa ny any an-tanana rehefa manao sosoa hariva iny. Ny vary aty efa nisondrotra daholo. Tsy misy azon'ny 1 euro na telo arivo ariary toyy ny taloha intsony ny kilao. Indray mandeha isanandro sisa no mba mihinam-bary. Ny voanjobory koa no mandefasa, namboly izahay fa tsy mety vanona.
Ary inona ny vaovao any? Toa lava be hono ny teteza-mita? Fa inona mihitsy no iampitana? Aza manaiky an'izany hanao CST izany aloha fa sao dia fanambatambazana izany. Aleo miandry fifidianana ihany... Sady vitantsika io izao no malaza.
Izay aloha ary fa tonga ihany ny train nandrasako. Tara 45mn ilay izy dia nanararaotra nanoratra aho.
Tahaky ny vizana le FB
2011-10-14 @ 15:02 in Serasera.org
Tsy dia ilay hoe izaho mitongilana kokoa amin'ny Google+ no antony anoratako ity fa hitako miha ratsy ilay Facebook.
Ny zavatra tsapako dia tsy hitako intsony ny zavatra malaza soratan'ny namako taloha. Taloha rehefa manokatra FB dia zavatra mahaliana avy hatrany no hita voalohany. Amin'izao dia mifangarongaro be ka manjary jerena tsirairay ny profile-n'ny namana. Ny tena mampihomehy dia zavatra hita ao amin'ny Google+ io saingy noho ny fahafahana manaraka "Cercles" ao amin'ny G+ dia tsy very.
Zavatra anakiray hitako ihany koa nampidirin'i FB dia ilay resaka "Zarao" (partager). Mifampiditra ilay izy dia mikorontana. Ao amin'ny G+ dia rehefa mizara zavatra irayy ianao dia mifindra any amin'ny rindrinao ilay zavatra nozarainao ary reference fotsiny sisa ny hoe taiza ny loharano. Raha misy mizara fanindroany izany iny dia tsy mifampiditra ka tsy misy ifandrasany mivantana amin'ilay loharano voalohany. Ao amin'ny FB dia mifampitaritarika eo daholo na ny loharano na ny nizara.
Na izany na tsy izany dia mbola any aloha ny ankamaroan'ny olona. Ny G+ rahateo mbola matotra loatra ka sarotra ho an'ny sasany ihany ny hampiasa azy.